အကောင်းဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်နွေ ဦး ရာသီမွေ့ယာ FactoryPrice-Rayson ကိုအသုံးပြုသည် | Rayson
Rayson စက်မှုဇုန်၊ Huasha လမ်း၊ ရှိရှန်၊ ဖိုရှန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန်၊ ဂွမ်ဒေါင်း၊ အဓိကထုတ်ကုန်များအကောင်းဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်နွေ ဦး ရာသီမွေ့ယာများအသုံးပြုခြင်း FactoryPrice-Rayson
ဤထုတ်ကုန်သည်အာကာသထဲတွင်ထားရမည့်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်နေရာတစ်ခုပြီးမြောက်စေသည်။ - ဖောက်သည်တစ် ဦး ကပြောကြားသည်။
မူလနေရာ ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ် (ပြည်မ)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Rayson, OEM
ခိုင်မာမှု - ပျော့ပျောင်း / အလတ်စား / Hard
ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း EXW, FOB, CIF၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်
လျှောက်လွှာ အိမ်၊ ဟိုတယ်၊ တိုက်ခန်း
ငွေပေးချေမှုကာလ TT / LC၊ ထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီငွေပေးချေရန် ၃၀%၊ ငွေ ၇၀% တင်ပို့မှုစာရွက်စာတမ်းမိတ္တူများနှင့်အလုပ်လုပ်ချိန် ၇ ရက်အတွင်း ၇ ရက်အတွင်းငွေပြန်အမ်းမည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပြည့်မီစေရန်သို့မဟုတ်စံချိန်စံညွှန်းမီစံချိန်စံညွှန်းမီအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်းလိုက်နာသည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိဖောက်သည်များအတွက် ၀ ယ်ယူပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသည့်နောက်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတင်ပို့ရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းနှင့်ပို့ဆောင်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများသည်ပျက်စီးမှုမရှိနိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်ခေါ်ဆိုရန်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူ Rayson သည်ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုထိရောက်သောနည်းဖြင့်ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်နိုင်သည်။
သင့်မွေ့ယာသည်မည်မျှကြာရှည်ခံသင့်သနည်း။ မွေ့ရာတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အကယ်၍ ညအချိန်တွင်ပစ်ချခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်မှုဖြင့်နိုးထပါက၎င်းသည်အသက်အရွယ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူမွေ့ရာအသစ်တစ်ခုကိုရရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးရှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အကုန်အကျခံစစ်ဆေးရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုသင်လက်ခံပါသလဲ TT, 30% Deposi နှင့် 70% ချိန်ခွင်လျှာမှာမြင်တွေ့နေရသည့် LC သည် ၇ ရက်အတွင်းအလုပ်လုပ်သော ၇ ရက်အတွင်းတင်ပို့သည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏မိတ္တူများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ လိပ်ထားသောမွေ့ရာကိုမည်သို့ဖြည်ရမည်နည်း။ ၁။ သင်၏အိပ်ခန်းအတွင်းရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့သေတ္တာကိုထည့်ပြီးမွေ့ရာများကိုဆွဲထုတ်ပြီးအိပ်ရာပေါ်တင်လိုက်ပါ။ ၂။ အတွင်းရှိပလတ်စတစ်ကိုမဖုံးရန်နှင့်မွေ့ရာများမပါစေရန်အပြင်ဘက်အိတ်ကိုကတ်များဖြင့်သုတ်လိမ်းပါ၊ ဓားဖြင့်တရားမတင်ပါနှင့်။ ၃။ လေဟာနယ်ချထားသောမွေ့ရာကိုအိပ်ရာပေါ်သို့တင်ပါ 4. မွေ့ရာသည်ချက်ချင်း decompress မှစတင်သည်နှင့်ပလတ်စတစ်အိတ်အားဖယ်ရှားပါ။ နာရီနှင့်အတူပလတ်စတစ်အိတ်အားသတိထားပါ။ 5. သင့်မွေ့ယာအသစ်ကိုအပြည့်အဝချဲ့ထွင်ရန် ၂၄ နာရီခွင့်ပြုပါ။
သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရံပြားနှင့်အတူ 1.Flat ချုံ့သည်